Jihaadiyiin ayaa tobaneeyo ku diley weerar ka dhacey Nigeria - – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Jihaadiyiin ayaa tobaneeyo ku diley weerar ka dhacey Nigeria –
Jihaadiyiin ayaa tobaneeyo ku diley weerar ka dhacey Nigeria –
Kooxda jihaadiyiinta ah ee xiriir la leh kooxda Daacish ayaa dilay daraasiin dad ah weeraradii ugu dambeeyay ee dhiiga badan ku daatay ee waqooyiga bari ee Nigeria, ilo maxalli ah ayaa sheegay axadii.
Dadka daggan tuulada Goni Usmanti ayaa u sheegay wakaalada wararka ee AFP in dagaalyahanadu ay toogteen 38 qof weerar kadhacay sabtidii isla markaana ay gaysteen gaari xamuul ah oo ay ku dhinteen tiro rakaab ah oo aan la garaneyn.
Sida ay sheegeen ilo wareedyadu, argagixisadu waxay wataan gawaarida xamuulka qaada waxay toogteen dadka deegaanka Goni Usmati kadib dagaal kooban oo ay la galeen xubno katirsan maleeshiyaatka dowlada ay taageereen.
“Kooxda kacdoon wadayaasha ah waxay dileen 38 qof, oo ay ku jiraan lix waardiyeyaal ah oo abaabulay dagaal kahor inta aan laga adkaanin,” ayuu yiri hoggaamiye kooxeedyada is-difaaca ee deegaanka Babakura Kolo.
Qof deegaanka ah, Grema Nuwaisu ayaa bixiyay isla tiradaas wuxuuna sheegay in dagaalyahanadu ay rasaas ku fureen gaari xamuul oo ay saaran yihiin ganacsato, gubay gaariga iyo kuwii gudaha ku jiray.
“Ma garanayno imisa qof ayaa saarnaa gaariga xamuulka ah oo buuxay,” ayuu yidhi Nuwaisu.
Gabi ahaanba way gubatay, taasoo adkeysay in la aqoonsado maydadka. Kaliya laba rakaab ah ayaa ka booday gaariga weyna baxsadeen.
Dhanka kale, ilaha amniga iyo dadka deegaanka ayaa sheegay in dhimashadii weerarkii labaad ee Sabtidii ka dhacay magaalada Monguno, oo 60 kiiloomitir u jirta, ay gaartay 15 oo ay ku jiraan sagaal askari.
“Tirada kuwa la dilay hadda waa 15, oo ay ku jiraan sagaal askari, foojignaan iyo shan qof oo rayid ah,” ayuu yiri xubin ka tirsan maleeshiyaatka dowladda ay taageerto Bukar Ari.
Sida laga soo xigtay Ari, dhowr deganeyaal ah waxaa ku dhaawacmay “rasaas goos goos ah iyo shumaca” waxaana lagu daweynayaa xarun caafimaad oo ay maamusho hay’ad samafal oo caalami ah.
Monguno, oo xarun u ah saldhig millatari oo muhiim ah iyo tobanaan kun oo dad ah oo ka soo barakacay dagaalkii tobanka sano qaatay ee gobolka, ayaa dhowr jeer lagu bartilmaameedsaday jihaadiyiinta.
Dadka deegaanka ayaa sheegay in ciidamada ladilay ay gubeen xarun booliis iyo dhismayaal dowladeed ka hor inta aysan diyaaradaha dagaalka weerarin cirka.
Militariga Nigeria ayaa ku qoray Twitter-ka Axadii in ciidanka iyo ciidamada cirka ay “si guul leh u caabiyeen” weerarkii Monguno ayna dileen 20 jihaadi.
Ma xusin wax khasaare ah oo soo gaaray askarta iyo dadka rayidka ah ama weerarkii Goni Usmanti.
Dilkan ayaa noqonaya kii ugu dambeeyay ee lagu dilo dagaalyahano la rumeysan yahay inay ka soo jeedaan Gobolka Islaamiga ee Galbeedka Afrika (ISWAP) kadib markii ay xasuuqeen 81 qof tuulo ku taal aaggaas Talaadadii.
Colaadda 10 sano ka jirtay waqooyi-bari Nigeria ayaa dishay ugu yaraan 36,000 oo qof isla markaana ku qasbay laba milyan guryahooda ka barabaxaan.
Maamulka Nigeria ayaa marar badan sheegtey in kacdoonka si weyn loo jabiyay.
ISWAP waxay ka go’day kooxda jihaadiyiinta Boko Haram sanadkii 2016 waxayna balanqaadeen inay daacad u noqon doonaan kooxda Dawladda Islaamka.
Previous articleTaliban ayaa dishay, dhaawacay in kabadan 400 ciidan
Next articlewarbixiintii ugu danbeysay covid19 Somaaliya
Degdeg: al shabaab oo ka hadashey qaraxii Afgooye